Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Radisson Hotel Group bank na Africa: ụlọ nkwari akụ iri na otu
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na-agbasa News Travel • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • Akụkọ Madagascar • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Isslọ ọrụ Radisson Hotel gbakwunyere ụlọ nkwari akụ iri na otu ọhụrụ n'Africa n'ime ọnwa itoolu mbụ nke 11, na-eme ka mgbasawanye ya gbasaa na kọntinent ahụ. Nke a na - eweta pọtụfoliyo ndị otu ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ nkwari akụ 2019 na ihe karịrị ụlọ 100 na-arụ ọrụ na mmepe na-agafe mba 17,000 nke Africa ma na-agbasi mbọ ike iru ụlọ nkwari akụ 32 + na ime ụlọ 130 site na 23,000.
Andrew McLachlan, Onye isi oche ndị isi, Development, Sub Sahara Africa, Radisson Hotel Group, kwuru, sị: "Ọ bụ afọ siri ike n'ezie maka Radisson Hotel Group, ọkachasị n'Africa, kọntinent anyị kwenyesiri ike na ya. N'afọ a, anyị abịanyela aka na ụlọ nkwari akụ ọhụụ kwa ụbọchị 25, nke ọ bụla kwekọrọ na atụmatụ mmepe anyị lekwasịrị anya nke gụnyere iwebata ụdị ọhụụ na mmụba na-eto eto na obodo ndị dị mkpa ebe anyị nwere ike ịzụlite ma rụọ ọtụtụ ụlọ nkwari akụ n'ime otu obodo ahụ. Nke a ga - ebute ọtụtụ ọrụ mmekọrịta yana uru ọnụ ahịa na họtel ọ bụla dị na otu obodo. Ugbu a, anyị na-elekwasị anya na obodo iri abụọ na atọ n’ime obodo iri isii buru ibu dị n’Africa ma nwee ọmarịcha akara ngosi mgbe mmadụ tụlere ogo pọtụfoliyo anyị n’Africa maka afọ iri na itoolu anyị nọrọ na mpaghara ụwa. Obi dị anyị ụtọ na akara ọkọlọtọ anyị, Radisson Blu, abanyela n'afọ nke abụọ dịka ọkwa kachasị mma n'Afrịka, dịka W Hospitality Pipeline Report si kwuo.
Tim Cordon, Onye isi oche ndị isi oche, Middle East & Africa, Radisson Hotel Group, kwuru, sị: “Site na ụdị arụmọrụ ọhụrụ anyị, anyị mebiri ndekọ na 2018 yana mmụba n'akụkụ GOP n’ahịa ọ bụla, agbanyeghị ngbanwe ụfọdụ. N'afọ a, anyị ka na-eme nke ahụ site na akara ngosi dị iche iche enwetara, dị ka ego ndị otu na-abawanye site na 14%, mmụba 30% na ego Radisson Rewards Meetings, karịa onyinye 50 meriri na 90% nke ụlọ nkwari akụ Radisson dị n'Africa na-echekwa asambodo Safehotels. Anyị ebidola ụzọ zuru ụwa ọnụ na nchekwa na nchekwa na nkwari akụ na Radisson Blu Hotel & Conference Center Niamey na-echekwa ọkwa dị elu nke asambodo Safehotels, Executive, ụbọchị atọ ka ụlọ nkwari akụ ahụ mepere na June 2019. Anyị etinyela itinye ego na akụ na ụba n'ime Africa. , na-eto eto ndị na-akwado ụlọ nkwari akụ anyị na ndị nwe anyị. ”
N'ikwu okwu banyere atụmatụ mmepe Group nke East Africa, McLachlan kwuru, "N'ikwekọ na atụmatụ mmepe afọ ise anyị, anyị na-achọ ịba ụba n'obodo ndị gbara ọkpụrụkpụ, dị ka Addis Ababa, Nairobi na Kampala. Enwere ohere dị ukwuu na Etiopia n'ihi ọnụ ọgụgụ mmadụ na ịdị mfe nke ịnweta ụgbọ elu, ya na ọdụ ụgbọ elu ndị isi nke Africa, Ethiopian Airlines. Addis Ababa nwere ike ịnabata ụlọ ọrụ ise anyị na-arụ ọrụ na Africa. Ohere ndị a abụghị naanị maka ụlọ nkwari akụ ọhụrụ kamakwa maka mgbanwe ndị a na-emepụta na mpaghara. Ọwụwa Anyanwụ Africa na-enye ohere pụrụ iche nke oke ọhịa na osimiri. Anyị na-enyocha ọrụ eco-tourism, na-enye ndị National Parks na Uganda, Rwanda, na Kenya. N'ihe gbasara atụmanya n'ụsọ osimiri, anyị na-enyocha ohere ndị dị na Mombasa, Zanzibar, Dar es Salaam na Diani. "
Ruo afọ a, Radisson Hotel Group meghere họtel abụọ na Africa; Radisson Blu Hotel & Conference Center, Niamey - ụlọ oriri na ọ brandụ andụ nke mbụ na 5-Star nke mba ahụ na nke mbụ na Algeria na mmalite nke Radisson Blu Hotel, Algiers Hydra. A na-akwado Radisson Hotel Group imeghe ụlọ nkwari akụ abụọ ọzọ tupu afọ agwụ, na mmeghe nke ụlọ nkwari akụ nke atọ na Kenya, Radisson Blu Hotel & Residence Nairobi Arboretum na Ọktọba na Radisson Blu Hotel Casablanca na-emeghe na Nọvemba, na-ede akara mbụ nke otu ahụ. obodo.
Na mgbakwunye na pọtụfoliyo ụlọ nkwari akụ isii bịanyere aka na Egypt na mbido afọ a, azụmahịa ụlọ ezumike ọhụụ fọdụrụnụ gụnyere:
N’ibido n’elu akara ụlọ nkwari akụ Radisson RED, otu a kwuputara mbinye aka na ụlọ nkwari akụ Radisson RED nke abụọ na South Africa. Emebere imeghe na February 2021, Radisson RED Hotel Johannesburg, Rosebank ga-abịarute ma maa jijiji ụlọ ọrụ ile ọbịa na obodo kachasị na South Africa.
Lọ nkwari akụ ahụ ga-adị na Oxford Parks, ebe a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị iche iche, gụnyere ụlọ ọrụ dị elu, ụlọ na ịkwado ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọ allụ restaurantsụ, ha niile dị n'ime ezigbo oke, gburugburu ebe obibi ọha na eze.
Lọ ohuru ahụ, nke dị 222-ụlọ Radisson RED Hotel Johannesburg, Rosebank ga-enwe ụlọ ọrụ na ụlọ elu mara mma. Lọ nkwari akụ ahụ ga-egosipụta nri Radisson RED a ma ama na echiche na ihe ọ beụverageụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, dịka 'iri nri ụbọchị niile' Oui Bar & Ktchn. N'ịgbaso nzọụkwụ nke nwanne ya nwanyị na họtel na Cape Town, tozuru oke mmanya kachasị mma n'obodo ahụ, Radisson RED Johannesburg, Rosebank ga-etu ọnụ ebe a na-ewu ụlọ n'elu ụlọ na mbara ala. Elu ụlọ ahụ ga-agụnye ebe igwu mmiri na ime ụlọ ahụ dị mma, na-enye ndị ọbịa nhọrọ dị iche iche iji tụsara, ha niile na-eleba anya na mbara igwe Johannesburg nke dị elu.
Isslọ nkwari akụ Radisson La Baie d'Alger Algiers, Algeria
Radisson Hotel La Baie d'Alger na Algiers bụ ụlọ nkwari akụ nke abụọ nke Algeria na nke mbụ ụlọ nkwari akụ Radisson na mba ahụ.
A na-emebe ụlọ nkwari akụ ọhụrụ ahụ imeghe na 2022, nke dị na mpaghara El Hamma. Nke a pụtara na ọ ga-adị mfe ịnweta ebe nkiri ntụrụndụ ndị ama ama dịka Ogige Botanical nke El Hamma, Ncheta Martyr na Bardo National Museum of Prehistory and Ethnography. Ọ dịkwa nso Port nke Algiers, ọdụ ụgbọ mmiri akụkọ ihe mere eme Algeria maka azụmaahịa azụmaahịa ụgbọ mmiri.
Hotellọ nkwari akụ nke 184 - nke nwere ọnụ ụlọ dị iche iche, obere ụlọ na ụlọ - ga-eweta ezigbo ahụmahụ Radisson site na ikwe ka ndị ọbịa nwee ahụ iru ala kpamkpam n'ime oghere dị jụụ. Ndị ọbịa ga-enwe ike ịmasị nri mpaghara na nke mba na ụlọ oriri na ọ diningụ diningụ nke oge a na-eri nri oge niile na-eri nri dị mfe na ihe ọveraụ refụ na-enye ume ọhụrụ na ebe ezumike ahụ. Lọ nkwari akụ ahụ ga-enwe nzukọ nzukọ na ihe omume ga-enwe 308sm nke ime ụlọ ga-enwe ụlọ nzukọ nzukọ ọkaibe ise na otu ebe nzukọ. Oge ezumike ga-agụnye mgbatị ahụ na spa.
Pọtụfoliyo nke họtelu atọ na Madagascar:
Radlọ Radisson Blu Hotel Antananarivo Waterfront na Radisson Hotel Antananarivo Waterfront ga-edozi nke ọma na ebe etiti dị na mpaghara ụzọ nke etiti obodo na isi azụmahịa na mpaghara azụmahịa. N'ime ọnụ ụzọ ámá atọ dị n'ọnụ ụzọ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ theụ ndị ahụ agaghị enwe ohere ịbanye n'ọdụ ụgbọ elu mba Antananarivo, ihe na-erughị nkeji 30. Emi odude ke Waterfront, ogige dị jụụ nke echekwara (sistemụ CCTV nke mmadụ na-arụ ọrụ 24) ma nwee nnukwu ọdọ mmiri na ọtụtụ ọpụpụ gụnyere ụlọ nri, ụlọ ahịa na sinima.
Akụ nke atọ, Radisson vlọ Ọrụ Antananarivo City Center, dị na mpaghara dị egwu na etiti obodo, nke ụlọ mmanya, ụlọ nri na nnukwu ụlọ akụ, ministri, na Obí Onye isi ala oge ochie gbara gburugburu.
E kesara ozi a site na Africa Hotel Investment Forum (AHIF) na-ewere ọnọdụ 23-25 ​​Septemba 2019 - Sheraton Addis, Ethiopia.